खुल्लामन्च: April 2009
आमा, म तपाईंको अनुहार हेर्न आएको चार बर्ष बितिसकेछ,
मैले तपाईंको सम्झनामा त्यो कबिता लेखेको ।
परदेश आखिर परदेशै रहेछ आमा,
त्यसैले म तपाईंलाई भेट्न यो अबसर पारेर आएको ।
तर, अझै पनि किन, किन तपाईंका आँखामा आशु, आमा ?
त्यो दश बर्षको प्रसब बेदनाले तपाईंले छुट्कारा पाउनुभेको छैन अझै ?
प्रचन्ड ठुल्दाइले ज्ञानेन्द्र माइलादाइलाई निकालेको सुनेको थिए,
के साचो हो आमा ?
ठुल्दाइले खुबै फुर्ती लगाएर मलाई चिट्ठी पठाका'थे त,
कुनी के के हो गर्छु भनेर,
मैले पढ्न नभ्याएर आमाको अगाडि पढ्न ल्या'को छु आमा ।
तर, मैले जडान गरेको बिजुलिको तारमा त धमिरा लागेछ,
बिजुली के भयो आमा, हाम्रो मुलुकमा ?
त्यो चिम पनि त ध्वासो लागेछ ।
बिजुली बल्न छोड्यो ?
गत महिना, उत्तमले पठा'को चिट्ठीमा लेखेका'थे आमा,
धमला सान्दाइलाई पनि प्रचन्ड ठुल्दाइले छुटाका रे,
आज क्लबमा कार्यक्रमको लागि बोलाका'थे आमा, ॠषि दाइले ।
तर मलाई जान मन लागेन आमा,
अनन्त काका र कटुवाल ठुलो बुवाको झगडा चलेको छ रे,
बाटामा अनाहकमा झगडामा परियो भने !
हैन आमा ?
फेरी, शर्मा काकालाई पनि त अस्ती मोसो दलेछन, हुल्याहा हरुले !!
हाम्रो देशमा के हुन लागेको आमा यो उपद्रव ?
आमा, तपाईं त नाजवाफ हुनुहुन्छ किन ?
आशु मात्रै किन तपाईंका आँखामा आमा ?
भैगो आमा, अहिले लाई सुतौ,
भोली बिहान आमा छोरा धित पुग्ने गरी कुरा गरौला ।
हिजो १५ हजार नेपालीको एउटै लाश भो
लाश अरु नबढुन् भन्ने मात्र आश भो ।
तानाशह र भ्रस्टाचारकै रगरगी भैदियो त्यहाँ
आज, महङी हामीले फेर्ने शुद्ध सास भो ।
सान्सद उडे मलाया, सिङापुर र बैन्कक सुरामा
जनता काट्ने बिधेयक त्यसैबाट पास भो ।
क्रान्तिकारीहरुको मस्ती सधैं महाजनको महलमा
निमुखाको घरमा बन्दुकधारी छापामारको बास भो ।
मुलुक बेचियो, अन्धकार उपहार हामी गरीबलाई
नेपाल आमा अमेरिका र भारतले खेल्ने तास भो ।
आज, जसले जे गरे पनि हुनी भाको छ, मुलुकमा
सत्य, धर्म र निस्ठा अनि सारा कुराको नाश भो ।
नबेचिउन चेली फेरी हाम्रै आँखा अगाडि, सस्तोमा
नयाँ सालले परिवर्तन ल्याउला भन्ने झिनो आश भो ।
नेपाल र मुलुक बाहिर छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजु - भाई, दीदी - बहिनी, बुवा - आमाहरु प्रति नयाँ बर्ष - ०६६ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!! यो बर्ष, तरबारको नहोस् , कलमको होस् । यो बर्ष बिषको नहोस्, मलमको होस् । आगामी दिनहरु आतंकका नहोउन, फेरी बारुदका नहोउन, भाईचारा र शान्तिले सदा सर्बदा स्थान पाओस । शुभकामना ! शुभकामना !! शुभकामना !!!